Xaalada Degmada Jalalaqsi oo saakay kacsan iyo ciidamo gudaha u galay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararka aan ka heleyno degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayan in xalay degmdaasi ay gudaha u galeen ciidamo uu wato maamulka cusub ee degmada loo magacaabay,iyadoo maamulkii hore ee Jalalaqsi uu ka warqabin.
Ciidamada gudaha u galay degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan ayaa waxaa la sheegay uu hogaaminayo maamulka cusub ee loo magacaabay degmada,isla markaana aysan ka warqabin maamulkii horey ee diidana inuu xilka wareejiyo.
Xuseen Sheikh Aadan Qaasim oo ah Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Jalalaqsi ayaa waxa uu sheegay in xalay degmada soo galeen ciidamo cusub,iyadoo uu ka warqabin maamulka hada gacanta ku haayo degmada,isla markana aan lagala tashan imaatinka maamulkaasi ee dhawaan la magacaabay.
Maamulka Magaalada Jalalaqsi ayaa diidanaa mudooyinkii danbe inuu xilka ku wareejiyo maamul cusub oo Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare u magacaabay degmada Jalalaqsi ee gobalka Hiiraan.
Xaalada degmada Jalalaqsi ayaa saakay waxa ay tahay mid kacsan,maadaama gudaha degmada ay ku wada sugan yihiin labada maamul, sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka.
Wafdi ka socda dowladaha Somalia Itoobiya iyo Eretrea oo ku wajahan dalka Jabuuti